“XAAJO NIN AAN AQOON ULAHEEN AMA WAX OGGEYN AYAA INDHAHA KA RIDA” – Ismail Warsame Blog
“XAAJO NIN AAN AQOON ULAHEEN AMA WAX OGGEYN AYAA INDHAHA KA RIDA”
Ismail Warsame	Uncategorized	 November 29, 2015 November 29, 2015 1 Minute
Sida aan u fahmay xaaladda colaaddeed ee Gaalkacayo haatan ka aluusana waxay salka ku haysaa, una dhacday sidatan:
1. Waxaa DFS jabisay Dastuurka markay abaabushay oo aqoonsatay Galmudug oo aan shuruudaha Dawlad-Gobolleednimo buuxin.
2. Taasi waxay dhashay colaad horle iyo dhuldoon gardaro oo qaawan ee Gobolka Mudugh.
3. DFS waxay hubaysay oo takulaysay maleeshiyada Galmudug.
4. Maleeshiyada Galmudug waxay hub culus ku garaaceen dhawr maalmood ka hor qaybo ka mid ah Magaalada Gaalkacayo si caqliga banii aadamka iyo Xeerka dagaallada ka fog.
4. Markii ugu horeysay ayey dadka Waqooyiga Gaalkacayo dareemeen in ayen jirin Dawlad daafacca dadweynaheeda ka dambaysa.
5. Dhalinyaro shacabka ka tirsan oo aan qaabaysnayn ayaa dagaal ugu yaacay xaafadda Baraxley. Koox yar ee ka amar diiday Taliyaha Guud ee ciidanka Puntland ayaa u guurmatay Dhalinyarada. Waa kooxdaa laga kubay gaariga iyo ambulance. Dhalinyarada shacabka qaar ka mid ah ayaa hataan lagu haystaa xaafadda Baraxley.
6. Dawlad Puntland haba yaraatey wax gacan kama geysan dagaalka marka laga reebo Ciidanka Airport-ka oo si kooban isu xilqaamay markay dawr xabadood soo tuureen.
7. Gaalkacayo waxay hadda gashay marxalad cusub iyo wufuud ku soo qulquleysa iyadoo arrinta laga dhigayo in labo Dawlad-Gobolleed dagaalamayaan. Armey arrintu noqotaa “Xaajo nin aan aqoon ulaheen ayaa indhaha ka rida”.
Previous Post Galkaio – A battleground for Vision-2016 Electioneering